နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ - Reward Foundation - ချစ်ခြင်း၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 23 ဇွန်လ 2014 အပေါ်တစ်ဦးစကော့တလန်ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအဖွဲ့အဖြစ်စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စကော့တလန်ဒါန Regulator, OSCR ၏ရုံးနှင့်အတူမေတ္တာ SC044948 မှတ်ပုံတင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံကာလနှစ်စဉ်ဇူလိုင်လကနေဇွန်လဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ ဒီစာမျက်နှာတွင်ကျနော်တို့နှစ်စဉ်များအတွက်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတစ်ခုစိတ္တဇထုတ်ဝေရန်။ အကောင့်အသစ်များ၏လတ်တလောအပြည့်အဝထားသည့်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် OSCR က်ဘ်ဆိုက် တစ်ဦးတို့ကိုပြုပြင်ကောင်းပြုပြင် form မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုကဏ္ areas အတော်များများတွင်အဓိကထားခဲ့သည်။
ဦး နှောက်၏သိပ္ပံနည်းကျပုံစံနှင့်သိပ္ပံနည်းကျပုံစံကို အသုံးပြု၍ ကျောင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားမှုအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ခံမှုလိုအပ်နေသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကိုအများပြည်သူပိုမိုနားလည်နိုင်ရန် TRF ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော 'သွားရမယ့်' အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်နိုင်ငံအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အကူးအပြောင်းတစ်ခုစတင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်မှောက်ခေတ်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံမှခေတ်သစ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မော်ဒယ်တစ်ခုသို့ရွေ့လျားနေသည်။
TRF အဖွဲ့၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဤသည်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်စီးကယ်နှုတ်တော်မူနိုင်သေချာလိမ့်မယ်။
ငါတို့စုစုပေါင်းဝင်ငွေကိုပေါင် ၁၂၄,၀၆၆ အသစ်သို့ထပ်မံနှစ်ဆတိုးလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကြီးမားဆုံးသောမဟာဗျူဟာများအပါအဝင်မဟာဗျူဟာမြောက်ထောက်ပံ့ငွေများစွာရရှိခဲ့သည်။
TRF သည်လိင်ပညာရေး၊ အွန်လိုင်းကာကွယ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာနယ်ပယ်များတွင်အများပြည်သူရှိနေခြင်း၊ စကော့တလန်၌ကျင်းပသော (၇) ကြိမ်မြောက်ကွန်ဖရင့်နှင့်အဖြစ်အပျက်များ၊ အင်္ဂလန်တွင် ၂ (ယခင်နှစ် ၅) နှင့်အမေရိကန်၌ရှိသည်။
ယခုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူ (၇၇၅) ဦး (ယခင်နှစ် ၁,၈၃၀) ဦး နှင့်တစ် ဦး ချင်းဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၂၀၀၀ နာရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူပေါင်း ၁,၇၃၆ ယောက်အားဆက်သွယ်စကားပြောခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ မတ်လမှစ၍ ဆုချီးမြှင့်ဖောင်ဒေးရှင်း၏လှုပ်ရှားမှုများသည်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်နှေးကွေးသွားသည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူနာပြုညီလာခံတွင်ပြောရန်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ အခြားစကားပြောခြင်းနှင့်သင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းမှုများလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
စကော့တလန်အစိုးရ၏တတိယကဏ္ Res ခံနိုင်ရည်ရန်ပုံငွေမှထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်ကုန်သွယ်မှုမှ ၀ င်ငွေကိုကူးစက်ရောဂါကနှိမ်နင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်သုံးရက်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ် ၁၆၀ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်တမ်းစေ့စပ်သေချာမှုဆိုင်ရာညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အဖြစ်အပျက်အဖြစ်စီစဉ်ခဲ့ပြီး Covid ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ပြန်လည်ပုံသွင်းခဲ့ရသည်။
ငါတို့ website တွင် www.rewardfoundation.org, ထူးခြားသော visitors ည့်သည်အရေအတွက် 175,774 (ယခင်နှစ် 57,274) အထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်နှင့်ကြည့်ရှုစာမျက်နှာများ၏အရေအတွက် (323,765 မှတက်) 168,600 ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိတွစ်တာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်နှစ် ၁၉၅၀၀၀ မှတင်ပို့ချက်ပေါင်း ၁၆၁၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျုချန်နယ်တွင် (https://www.youtube.com/channel/UC1-mihcAj9mf-nJKLWiT5KA) 3,199-2018 ခုနှစ်တွင် 19 ကနေ 9,929 အထိဗီဒီယိုအမြင်စုစုပေါင်းအရေအတွက်။ အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုကတော့နယူးဇီလန်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကလစ်ကနေဒေါက်တာ Don Hilton က porn ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် TRF လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်ပုံပြင်များပါ ၀ င်သောဘလော့ဂ်တင်ပို့ချက် ၁၄ ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်များတွင်ဆောင်းပါးနှစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အတွင်း TRF သည်မီဒီယာတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပြီးယူကေနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်သတင်းစာ ၅ ခု (ယခင်နှစ် ၁၂) တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရေဒီယိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ (၆ ခုကနေအောက်တိုဘာ ၆ ရက်) မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဘီဘီစီစကော့တလန်ရုပ်မြင်သံကြားမှ The Nine မှလက်ရှိဖြစ်ရပ်များကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။
Mary Sharpe သည်သူမ၏အခန်းကဏ္endedကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရှိလိင်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အကြံပေးကော်မတီ၏ဥက္ကဌအဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူမသည် SASH ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အဖြစ် ၄ နှစ်သက်တမ်းပြည့်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၀ မေလအထိမာရီယာရှားသည်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၊ Lucy Cavendish College တွင်လာရောက်လည်ပတ်သောပညာရှင်ဖြစ်သည်။
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းကလိင်သဘောထားများနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်အမျိုးသားစစ်တမ်းကို NATSAL-4 စစ်တမ်းကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
တတိယနှစ်ပြေးပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တော်ဝင်ကောလိပ်တော်အထွေထွေ Practitioners အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များကိုတစ်နေ့တာသင်တန်းများပို့ချပေးနိုင်ခဲ့သည်။ CPD အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို UK မြို့ကြီး ၉ မြို့တွင် (၅ ခုမှအထက်) နှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အခြား CPD အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုကိုယူ။ အက်စ်။ မှပညာရှင်များသို့တင်ပြခဲ့သည်။
TRF သည်ကျောင်းများ၊ ပညာရှင်များနှင့်ပြည်သူလူထုအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအန္တရာယ်ရှိသောအသိပညာပေးသင်တန်းများပေးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ကျောင်းများတွင်အသုံးပြုရန် sexting ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကိုအစီအစဉ်များသည်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကျောင်းအတော်များများတွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမသင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကိုယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် TES.com ဆိုင်၌ရောင်းချခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းလူပေါင်း ၃၁၉ ယောက်ကိုအခမဲ့နာရီ ၅၇၇ နာရီအခမဲ့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နာရီပေါင်း ၂၃၀ နာရီထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည်၊ သို့သော်လက်ခံသူ ဦး ရေမှာ ၄၅၃ ဦး ရှိခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှစ်ခုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရှင်များနှင့်ကျောင်းများသို့ပို့ချသည့်သင်တန်းများအတွက် ပိုမို၍ ငွေတောင်းခံနိုင်ခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေစီးဆင်းမှုတိုးတက်လာသည်။ ကျနော်တို့အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခံနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးအလားအလာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်လာတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်စကော့တလန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပရိသတ်များသိသိသာသာတိုးတက်လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသောအခမဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Age Verification Virtual Conference သည်ပရိသတ်အသစ်များကိုရောက်ရှိရန်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများရှိခဲ့သည် 'နိုင်ငံတကာပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဂျာနယ်' နှင့် 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့် compulsivity '။ ဤစာတမ်းများသည်နောင်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသနကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ ၂၀၁၈-၁၉ တွင်စတင်ခဲ့သောအခမဲ့အင်တာနက်မိဘများလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုစာမျက်နှာ ၄ ​​မျက်နှာမှ ၈ မျက်နှာအထိကြီးထွားလာစေပြီးမိဘများသည်သူတို့၏ကလေးများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။
ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry ၏သိပ္ပံနည်းကျမော်ဒယ်သုံးပြီးကျောင်းများဘို့ငါတို့သင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့နှင့်မည်သို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်
TRF တစ်ဦးယုံကြည်ရလောက် '' go-မှ '' အဖွဲ့အစည်းကစိတ်ဖိစီးမှုမှတည်ဆောက်ခြင်းခံနိုင်ရည်၏အများပြည်သူနားလည်မှု furthering တစ်လမ်းအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှု၏လယ်ပြင်တွင်ထောက်ခံမှုလိုအပ်နေလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့လုပ်နေတဲ့အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း
ဤကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်စီးဆင်းမှုများကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် TRF အဖွဲ့၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်တန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေကိုပေါင် ၆၂,၀၀၀ ကျော်အထိနှစ်ဆတိုးလိုက်တယ်၊ အကြီးဆုံးရန်ပုံငွေရပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေး ၀ င်ငွေကိုလည်းတိုးစေတယ်။
Big Lottery Fund မှ 'အကြံဥာဏ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း' ထောက်ပံ့ငွေကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုအစိုးရကျောင်းများတွင်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆရာများအသုံးပြုရန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုတီထွင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကိုဤ 2019 အကုန်မှယေဘုယျရောင်းချသွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။
TRF သည်လိင်ပညာရေး၊ အွန်လိုင်းကာကွယ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်အသိပညာနယ်ပယ်များတွင်ရှိနေခြင်း၊ စကော့တလန်၌ညီလာခံ ၁၀ ခုနှင့်အဖြစ်အပျက်များ (ယခင်နှစ် ၁၂) တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်တွင် ၅ နှစ် (ယခင်နှစ် ၃)၊ ယူအက်စ်၊ ဟန်ဂေရီနှင့်ဂျပန်တို့တွင်တစ် ဦး စီဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူပေါင်း ၁,၈၃၀ (ယခင်နှစ် ၃,၅၀၀) လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ လူပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့်ကိုဆက်သွယ်မှုနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုကိုနာရီပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တွစ်တာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇွန်လအထိကျွန်ုပ်တို့သည် tweet ဆွဲဆောင်မှုပေါင်း ၁၉၅၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ယခင်နှစ် 2018 ကနေဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် GTranslate ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာပြန်ဆိုမှုအားဘာသာစကား ၁၀၀ ဖြင့်အပြည့်အ ၀ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သော visitors ည့်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ web traffic ၏ ၂၀% ခန့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုမာလီ၊ အိန္ဒိယ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ တူရကီနှင့်သီရိလင်္ကာတို့တွင်ပရိသတ်များထံရောက်ရှိနေသည်။
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် TRF လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လူ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းနောက်ဆုံးရေးသားထားသောဘလော့ဂ်ပို့စ် ၃၄ ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ပိုပြီးတစ်ခုပဲ။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း TRF သည်မီဒီယာတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယူကေနှင့်နိုင်ငံတကာတွင် (ယခင်နှစ် ၂၁) နှင့်စကော့တလန်ရှိဘီဘီစီအယ်ဘားတွင်သတင်းစာ ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ရေဒီယိုအင်တာဗျူး (၆ ခုမှအထက်) ၆ ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးဆယ်ကျော်သက်များအကြောင်းတီဗွီမှတ်တမ်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုအကြွေးရရှိခဲ့သည်။
Mary Sharpe သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလိင်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အကြံပေးကော်မတီ၏ဥက္ကဌအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင်မာရိသည်တစ် ဦး အဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရသည် WISE100 လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ခေါင်းဆောင်များသည်။
Immewive and Addictive Technologies ၏ကြီးထွားမှုအတွက် Commons Select Committee ၏စုံစမ်းမေးမြန်းချက်အား Reward Foundation မှတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ စကော့တလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံး ၀ န်ကြီးချုပ်၏အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားအကြံပေးကောင်စီတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပရိုဂရမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များကိုတစ်နေ့တာသင်တန်းများပို့ချနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Royal College of General Practitioners အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ CPD အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို UK မြို့ကြီး ၅ မြို့ (၄ ခုမှအထက်) နှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြား CPD အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုကိုယူ။ အက်စ်။ မှပညာရှင်များသို့တင်ပြခဲ့သည်။
TRF အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုအသိအမြင်ကျောင်းများမှသင်တန်း, ပညာရှင်များနှင့်အထွေထွေပြည်သူ့ကယ်နှုတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
စုစုပေါင်းလူပေါင်း ၄၅၃ ယောက်ကိုနာရီ ၂၃၀ အခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မနှစ်ကနာရီပေါင်း ၁၁၂၀ ထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှစ်ခုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားသင်ကြားပို့ချမှုပိုမိုများပြားစေရန်အတွက်ငွေသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေစီးဆင်းမှုတိုးတက်လာသည်။ ကျနော်တို့အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခံနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးအလားအလာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်လာတယ်။
တန်ပြန်အချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အသံလွှင့်မီဒီယာများအထူးသဖြင့်ရေဒီယိုမှစကော့တလန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပရိသတ်များသိသိသာသာတိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်ဖြန့်ဝေသောအခမဲ့သတင်းအချက်အလက်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုလေးခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာနယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့် compulsivity အခမဲ့လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့မိဘများလမ်းညွှန်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေလမ်းညွှန်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာလေးမျက်နှာသည်ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိမိဘများအားကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ကဤကွဲပြားခြားနားအလုပ်စီးကယ်မလွှတ်နိုင်သေချာဖို့ TRF အဖွဲ့များ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်
ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ Big ထီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ထံမှထောက်ပံ့ငွေ '' အကြံပြုချက်များပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် 'နှင့်ပြည်နယ်ကျောင်းများတွင်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆရာ, ဆရာမအသုံးပြုရန်စမ်းသပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပစ္စည်းများအသုံးချမှဆက်လက်ပြောကြားသည်။
TRF 12 ညီလာခံနှင့်စကော့တလန် (ယခင်တစ်နှစ် 5), အင်္ဂလန်မှာ3(ယခင်တစ်နှစ် 5) နှင့် USA တွင်2အတွက်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်တဦးတည်းတစ်ဦးချင်းစီတက်ရောက်ခြင်း, လိင်ပညာရေးတွင်အွန်လိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုအသိအမြင်ကွက်လပ်များကိုယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက် ခရိုအေးရှားနှင့်ဂျာမနီ၌တည်၏။
ယခုနှစ်စဉ်အတွင်းကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင် 3,500 ကျော်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ 2,920 လူတစ်ဦး / နာရီအကြောင်းကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
တွစ်တာတွင်ဇူလိုင်လ 2017 ကနေဇွန်လ 2018 ဖို့ကာလ၌ကျွန်တော်တက်ယခင်တစ်နှစ် 174,600 ကနေ 48,186 tweet တွေ့ကြုံအောင်မြင်။
ဇွန်လ 2018 ငါတို့သည်စက်ဘာသာပြန်ချက်မှတဆင့် 100 ဘာသာစကားများ၌အကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာကိုအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ GTranslate ကဆက်ပြောသည်။
ယခုနှစ်ငါတို့သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးလ်စာရင်း5edition မှာ GDPR လိုက်နာဖြစ်လာခဲ့သည်ထွက်ထားတော်မူ၏။ ယခုနှစ်စဉ်အတွင်းကျွန်တော် TRF လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်ပုံပြင်များဖုံးအုပ် 33 ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤသည်2ယခင်နှစ်ကထက်ပိုပြီးဘလော့ဂ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဦးတည်းဆောင်းပါးရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုနှစ်စဉ်အတွင်း TRF မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အတွက်ဘီဘီစီရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ပြန်ဗြိတိန်တွင် 21 သတင်းစာပုံပြင်များအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောနှင့်နိုင်ငံတကာတွင် (ယခင်တစ်နှစ် 9) အဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့, မီဒီယာမှာပါရှိပါတယ်မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ကျနော်တို့4ရေဒီယိုအင်တာဗျူးများအတွက် featured ။
မာရိကရှပ် USA တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုး (ခါးပန်း) အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် Advocacy ကော်မတီကုလားထိုင်အဖြစ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှဗြိတိန်ရဲ့အင်တာနက်လုံခြုံမှုမဟာဗျူဟာအစိမ်းရောင်စက္ကူတိုင်ပင်ဖို့တုံ့ပြန်မှုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေမှအဆိုပြုထားသောပြင်ဆင်ချက်အပေါ်အင်တာနက်ကိုဘေးကင်းရေးမဟာဗျူဟာဒစ်ဂျစ်တယ်, ယဉ်ကျေးမှုအဘို့အဦးစီးဌာန၌ရေးအဖွဲ့, မီဒီယာနှင့်အားကစားတစ်ခုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျနော်တို့ကသူတို့တည်မြဲသည့် Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများဖို့တစ်ရက်သင်တန်းများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအထွေထွေ Practitioner အသိအမှတ်ပြု၏တော်ဝင်ကောလိပ်အောင်မြင်။ CPD အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ4ဗြိတိန်မြို့ကြီးများအတွက်နှုတ်ယူ၏။
TRF အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုအသိအမြင်ကျောင်းများမှသင်တန်း, ပညာရှင်များနှင့်အထွေထွေပြည်သူ့ကယ်နှုတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့ Wonder တွေ့ကြုံရှိုးကျောင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကို-sponsored ပူးတွဲ အဆိုပါ Coolidge Effect အဆိုပါသွားလာလမ်းကြောင်းပြဇာတ်ရုံမှာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO နဲ့သဘာပတိ3ရက်ပေါင်းကျော် Edinburgh အတွက်ကောင်းမွန်သောအကြံပြုချက်များ Catalyst လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့သာရုံပြီးခဲ့သည့်နှစ် 1,120 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခမဲ့သင်တန်း၏ 1,165 လူတစ်ဦး / နာရီစုစုပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်။ TRF အောက်ပါအုပ်စုများမှအခမဲ့သင်တန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏:
ကျနော်တို့ကဆင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ် 310 ကနေအသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများအတွက် 840 မိဘများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှတင်ပြ
အဆိုပါ CEO ဖြစ်သူဘီဘီစီမြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်မှာတီဗီစတူဒီယိုပရိသတ်ကိုအတွက် 160 ကလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 10 မိနစ်အစိတ်အပိုင်းဟာ Nolan ပြရန်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သော program ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
ကျနော်တို့ညီလာခံနှင့်တက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် 908 ကနေစကော့တလန်, အင်္ဂလန်, အမေရိကန်, ဂျာမနီနှင့်ခရိုအေးရှားအတွက်ဖြစ်ရပ်များမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအုပ်စုများအတွက် 119 လူတွေကိုတင်ပြ
ကျနော်တို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစေတနာ့ဝန်ထမ်းနေရာချထားပေးကာအပြည့်အဝစာသင်ကျော် 15 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများပတျသကျတဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းသင်တန်းပူးပေါင်း။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ငါတို့သည်ပြည်နယ်ကျောင်းများတွင်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆရာ, ဆရာမအသုံးပြုရန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ Big ထီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ထံမှထောက်ပံ့ငွေတစ်£ 10,000 '' အကြံပြုချက်များပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် '' ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
1 ဇွန်လ 2016 မှစ. 31 မေလ 2017 ဖို့စီအီးအို၏လစာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူမ၏မှပေးဆောင်သော£ 15,000 ၏ထောက်ပံ့ငွေ '' ဒါဟာ Build '' တစ်ဦး UnLtd ထောင်စုနှစ်ဆုပေးပွဲကနေထောက်ပံ့ငွေများက underwritten ခဲ့သည်။
မာရိကရှပ်ဒီဇင်ဘာလ 2016 အတွက်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်လည်ပတ်ခြင်းကိုပညာတော်သင်အဖြစ်သူမ၏ချိန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ကင်းဘရစ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေး TRF ရဲ့သုတေသနပရိုဖိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ CEO ဖြစ်သူနှင့်သဘာပတိအဆိုပါအရည်ပျော် Pot မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်း၏ Accelerator လူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု Incubator Award ဆုကို (SIIA) အစီအစဉ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
TRF5ညီလာခံနှင့်စကော့တလန်, အင်္ဂလန်အတွက်5နှင့်အမေရိကန်, ဣသရေလအမျိုးနှင့်သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့အခြားသူတွေအတွက်ဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ခြင်း, လိင်ပညာရေး, အွန်လိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုအသိပညာနယ်ပယ်များတွင်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, TRF အဖွဲ့ဝင်များကရေးသားသုံး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
တွစ်တာတွင်ဇူလိုင်လ 2016 ကနေဇွန်လ 2017 ဖို့ကာလ၌ 46 မှ 124 ကနေနောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ 277 tweets စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ 48,186 tweet တွေ့ကြုံအောင်မြင်။
ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ရွှေ့ပြောင်း www.rewardfoundation.org အသုံးပြုသူများနှင့်လူထုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျကိုအလွန်တိုးတက်မြန်နှုန်းနှင့်အတူသစ်တစ်ခု hosting အတွက်ဝန်ဆောင်မှုရန်။ ဇွန်လ 2017 ငါတို့သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများ, ငါတို့တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးအား4ကြိမ်ထုတ်ဝေရန်ရည်ရွယ်ထားသောသတင်းလွှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်စဉ်အတွင်းကျွန်တော် TRF လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်ပုံပြင်များဖုံးအုပ် 31 ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ယခုနှစ်စဉ်အတွင်း TRF မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အတွက်ဘီဘီစီရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ဗြိတိန်တွင်9သတင်းစာပုံပြင်များအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအဖြစ်, မီဒီယာအတွက် feature မှစတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုကျယ်ပြန့်ရေဒီယိုအင်တာဗျူးများနှင့် OnlinePROTECT ထုတ်ဝေသောအွန်လိုင်းဗီဒီယို featured ။
မာရိကရှပ်ဆိုတဲ့အခနျးကွီး Co-ရေးသား အင်တာနက်ကို Flow မော်ဒယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ': Practitioner များအတွက်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အလုပ်လုပ်' ဆိုတဲ့စာအုပ်အဘို့အစတိဗ်ဒေးဗီးစ်အတူ။ ဒါဟာမတ်လ 2017 အတွက် Routledge ထုတ်ဝေသောခဲ့သည်။
မာရိကရှပ် USA တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုး (ခါးပန်း) အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် Advocacy ကော်မတီကုလားထိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှုသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လိင်ပညာပေးစကော့တလန်ကျောင်းများတွင်သင်ရိုးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများစကနေဒါပါလီမန်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အနာဂတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ချေမှုန်းဘို့စကော့တလန်ရဲ့မဟာဗျူဟာဖို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတုံ့ပြန်မှုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Reward Foundation ကိုစကော့တလန်အစိုးရမှထုတ်ဝေသောကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတွက်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်စာရင်းပြုခဲ့သည်။ ဗြိတိန်ပါလီမန်မှတစ်ဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဥပဒေကြမ်းအားဗြိတိန်ပါလီမန်မှတစ်ဆင့်ကူးယူရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ဗြိတိန်ပါလီမန်၏မိသားစု၊ Lords နှင့် Commons မိသားစုနှင့်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖွင့် 1,165 ကနေအခမဲ့သင်တန်း၏ 1,043 နာရီစုစုပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါအုပ်စုများမှလေ့ကျင့်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏:
စကော့တလန်ရှိကျောင်းများမှာ 650 ကျောင်းသား
အသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများအတွက် 840 မိဘများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ
ဘီဘီစီမြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်မှာတီဗီစတူဒီယိုပရိသတ်ကိုအတွက် 160 လူတွေ။ အဆိုပါ 10 မိနစ်အစိတ်အပိုင်းဟာ Nolan ပြရန်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သော program ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
ညီလာခံနှင့်စကော့တလန်, အင်္ဂလန်, အမေရိကန်နှင့်ဣသရေလအမျိုး၌ဖြစ်ရပ်များမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအုပ်စုများအတွက် 119
ကျနော်တို့ကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်4စေတနာ့ဝန်ထမ်းနေရာချထားမှုကိုထောက်ပံ့ပေး။
ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry ၏သိပ္ပံနည်းကျမော်ဒယ်သုံးပြီးကျောင်းများများအတွက်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုထူထောင်ရန်နှင့်မည်သို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်
TRF တစ်ဦးယုံကြည်ရလောက် '' go-မှ '' အဖွဲ့အစည်းကစိတ်ဖိစီးမှုမှတည်ဆောက်ခြင်းခံနိုင်ရည်၏အများပြည်သူနားလည်မှု furthering တစ်လမ်းအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပျက်ဆီး၏ဧရိယာ၌ထောက်ခံမှုလိုအပ်နေလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့လုပ်နေတဲ့အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း
၂၀၁၆ ဇွန်လမှတစ်နှစ်မာရီယာလစာကိုလစာပေးရန်ပေါင် ၁၅၀၀၀ ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်“ Build it” ဆုအတွက် UnLtd သို့အောင်မြင်စွာလျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်မေရီ ၂၀၁၆ မေလတွင်ပရဟိတလုပ်ငန်းမှနုတ်ထွက်ပြီးကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်၏အခန်းကဏ္ transition သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်။ ဒေါက်တာ Darryl Mead အားဥက္ကဌအသစ်အဖြစ်ဘုတ်အဖွဲ့မှရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
မာရိကရှပ်အလားအလာပူးပေါင်းများ၏ကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်ကဦးဆောင်။ အစညျးအဝေးမြား, အပြုသဘောဆောင်သောအကျဉ်းထောင်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အပြုသဘောဆောင်သော Futures ?, စကော့တလန်ကက်သလစ်ပညာရေးအသင်း Lothians လိင်ကျန်းမာရေး, NHS Lothian ကျန်းမာရေးကိုလေးစား Edinburgh ကိုစီးတီးကောင်စီ, အရက်ပြဿနာများနှင့်ဖေဖေ၏တစ်နှစ်တာအပေါ်စကော့တလန်ကနျြးမာရေးလှုပ်ရှားမှုကျင်းပခဲ့ကြသည်။
မာရိကရှပ်ဒီဇင်ဘာလ 2015 အတွက်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်လည်ပတ်ခြင်းကိုပညာတော်သင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Darryl Mead UCL မှာဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤအတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေး TRF ရဲ့သုတေသနပရိုဖိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
မာရိကရှပ်အရည်ပျော် Pot မှာလူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု Incubator Award ဆုကို (SIIA) အစီအစဉ်မှတဆင့်သူမ၏လေ့ကျင့်ရေးပြီးစီးခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာ Darryl Mead နှင့်အတူ, ထို Accelerator SIIA အစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
TRF9ဗြိတိန်ညီလာခံတက်ရောက်ခြင်း, အွန်လိုင်းကာကွယ်မှုလယ်ကွင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုနယ်ပယ်များတွင်တစ်ဦးရှိနေခြင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
TRF အဖွဲ့ဝင်များကရေးသားစာတမ်းများ Brighton, Glasgow, Stirling, လန်ဒန်, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်မြူးနစ်အတွက်တင်ဆက်မှုများအတွက်လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့က Twitter feed ကို @brain_love_sex စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့် 20 စာမကျြနှာမှ 70 ကနေ website ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း developer များအနေဖြင့် website မှာ running လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။
မာရိကရှပ်ဆိုတဲ့အခနျးကွီး Co-ရေးသား အင်တာနက်ကို Flow မော်ဒယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ': Practitioner များအတွက်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အလုပ်လုပ်' ဆိုတဲ့စာအုပ်အဘို့အစတိဗ်ဒေးဗီးစ်အတူ။ ဒါဟာဖေဖော်ဝါရီလ 2017 အတွက် Routledge ထုတ်ဝေသောလိမ့်မည်။
မာရိကရှပ် USA တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုးများအတွက် Society ၏ဘုတ်အဖွဲ့ (ခါးပန်း) ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
TRF သြစတြေးလျအထက်လွှတ်တော်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသို့မှတုံ့ပြန်မှုတင်သွင်း အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်မှတဆင့်သြစတြေးလျကလေးတွေပြုခံရခြင်းအန္တရာယ် နှင့်ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ပေါ် ကလေးသူငယ်ဘေးကင်းရေးအှနျလိုငျး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအတွက်ခေတ်အတည်ပြု။
TRF အဓိကလူငယ်က်ဘ်ဆိုက်အတွက်အမျိုးအနွယ်ကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်£ 2,500 ထောက်ပံ့ငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုထံမှရေးဆွဲလူငယ်များနှင့်အတူပူးတွဲတီထွင်ကြလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖွင့် 1,043 ကနေအခမဲ့သင်တန်း၏ 643 နာရီစုစုပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Edinburgh မြို့ကောင်စီအဘို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းပေးခြင်းအပေါ် 60 ဆရာများ
NHS Lothian များအတွက် 45 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအရာရှိများ
Glasgow အတွက် Wonder တွေ့ကြုံရဘို့3သရုပ်ဆောင်များကို
အလွဲသုံးမှုများကုသမှုများအတွက်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ 34 အဖွဲ့ဝင်
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ onlineProtect ညီလာခံမှာ 60 ကိုယ်စားလှယ်
အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအတွက်နည်းပညာစွဲများနိုင်ငံတကာ Congress မှာ 287 ကိုယ်စားလှယ်
လန်ဒန်မြို့ရှိအနုပညာတော်ဝင်ကောလိပ်မှာ 33 အနုပညာရှင်နဲ့အနုပညာကျောင်းသားများကို
ဒေါက်တာ Loretta Breuning နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အရည်ပျော် Pot ၏ 16 အဖွဲ့ဝင်
Edinburgh အတွက် Chalmers လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး Center မှာ 43 န်ထမ်းများ
မြူးနစ်, ဂျာမနီအတွက်လူမှုရေးသိပ္ပံလိင်သုတေသနအပေါ် DGSS ညီလာခံမှာ 22 ကိုယ်စားလှယ်
Edinburgh ရှိ George Heriot's ကျောင်းမှကျောင်းသား ၂၄၇ ဦး အားကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနေရာ ၃ ခုပေးခဲ့သည်။
Lay ပရိတ်သတ်များအတွက်ပုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ဦးကစီးရီးဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuit ကိုအလုပ်လုပ်ပုံကိုထုတ် setting ကိုမာရိရှပ်နှင့် Darryl Mead ကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကား, စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်စူးစမ်း supernormal လှုံ့ဆော်မှုရှင်းပြပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းနေတဲ့အမူအကျင့်စွဲဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက်လမ်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ရောက်ရှိနေပြီပရိသတ်တွေကိုအောက်တွင်ထုတ်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ မာရိကရှပ်စကော့တလန်အစိုးရများအတွက်အလုပ်လုပ် 150 အရပ်ဘက်အစေခံကျွန်အကြောင်းကိုမိန့်မြွက်တော်မူ၏။
သဘောတူညီချက်စာအုပ်၏အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson အဘို့တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှရန်စာရေးသူများကလက်ဆောင်အဖြစ်ခံရဖို့။ ပထမဦးဆုံးအမူပိုင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဥက္ကဌအဖြစ် Mary Sharpe သည် The Melting Pot ၌ Social Innovation Incubator Award (SIIA) သင်တန်းအစီအစဉ်တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုသည် Melting Pot ၌နေရာလွတ်ငှားရမ်းခတစ်နှစ်ပါဝင်သည်။
မာရိကရှပ်တစ် SIIA စေးပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှအဘို့အ£ 300 အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့အားထိရောက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် FirstPort / UnLtd မှအဆင့် ၁ ရန်ပုံငွေမှမာရီယာရှပ်သည်လျှောက်ထားပြီး£ ၃၁၅၀ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ဤဆုမှရရှိသော ၀ င်ငွေကိုနောက်ဘဏ္financialာရေးနှစ်မတိုင်မီအထိရရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတခုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဂရပ်ဖစ်တစ်ဦးထက်ပိုသောခေတ်မီ set ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အခမဲ့သင်တန်း၏ 643 နာရီစုစုပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါပညာရှင်များကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည် - NHS Lothian အတွက်တစ်နေ့လုံးလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရာရှိ ၂၀ Lothian & Edinburgh Abstinence Program (LEAP) မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင် ၂၀ ကို ၂ နာရီ၊ ၁.၅ နာရီပြစ်မှုလေ့လာခြင်းအတွက်စကော့တလန်အသင်းမှရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတရားသူကြီး ၄၇ ယောက်၊ ၂ နာရီကြာ Polmont လူငယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဌာနမှမန်နေဂျာ ၃၀၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများကုသရေးအမျိုးသားအသင်း၏စကော့တလန်ဌာနခွဲမှအတိုင်ပင်ခံနှင့်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထူးကု (၃၅) ဦး၊ ၁.၄ နာရီဂျော့ခ်ျဟာရီယိုကျောင်းမှဆsix္ဌမပုံစံကျောင်းသား ၂၀၀ ။
ကျနော်တို့ကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်3စေတနာ့ဝန်ထမ်းနေရာချထားမှုကိုထောက်ပံ့ပေး။